Tareenka Tareenka LIRR wuxuu carqaladeeya Gaadiidka Magaalada New York (Fiidiyow) | RayHaber | raillynews
HomeDUNIDAAmerica1 AmericaLIRR Tareen Iska Daaya Tareenka New York (Video)
19 / 06 / 2013 1 America, America, Nidaamka Isgaadhsiinta ee Intercity, DUNIDA, tareenka, GUUD, Headline, VIDEOS
Gaadiidka LIRR ee Gaadiidka Gaadiidka ee New York
Fiidnimadii Isniinta, Long Island tareenada (Long Island Rail Road - LIRR) a derailment in tunnel East River ah ee tareenka saacadaha shaqada ka dib rakaabka ee Penn Station ayaa keentay in dib u dhac niyad iyo xiritaanka.
Sida laga soo xigtay AP / NBC News, Hay'adda Metropolitan Metropolitan Organization (MTA) ayaa sheegtay in tareen LIRR ah oo ku yaal jidka Hempstead wax yar ka dib markii uu ka tagay Penn Station at 6: 00. Tareenka ugu horreeya ee tareenka 10 ayaa gebi ahaanba iska tuuray, halka gaari-labaad uu qayb ahaan ka lumay.
Tameka Chandler, oo ah qof rakaab ah, ayaa sheegay in tareenka uu ku jiray siddeed caruur ah intii lagu jiray dhacdada. Chandler ayaa sheegay in tareenku uu bilaabay inuu ruxo markii uu tuneelay.
Ler dadka way arkeen, laakiin ma jirin wax jahawareer ah, ayuu Chand sheegay Chandler, isagoo sheegaya in rakaabku degganaayeen.
Lama yaqaanno waxa sababay tareenka oo ka cararaya.
Sida laga soo xigtay Waaxda Dab-demiska ee New York (FDNY), rakaabkii 700 ee tareenka lama dhaawicin, dabdamiyayaashuna waxay isku dayeen inay rakaabka ka qaadaan tareenka ku guulaystay. Afhayeen u hadlay LIRR ayaa sheegay in rakaabkii ugu dambeeyay ee tareenka loo oggolaaday in uu u socdo meerista. Si loo badbaadiyo rakaabka kale ee baabuurta ugu horeysa ee tareenka, tareen kale ayaa soo wajahday tareenka xagjirka ah.
Mas'uuliyiintu waxay isku dayayaan inay go'aansadaan sida si ammaan ah loogu qaado gawaarida la jiido, halka tareenka jidka tareenadu hadda aan la heli karin. Tareenka xayeysiinta ah wuxuu xannibay mid ka mid ah afarta dekedda East River. Sababtoo ah dhacdada, habeenkii isniinta, adeegga tareenka bari ayaa ahaa mid xadidan. Intaa waxaa dheer, adeegga tareenka galbeedka ayaa la joojiyay si loogu oggolaado tareenada in ay u guuraan bari iyadoo la isticmaalayo saddexda tunnel ee soo hadhay.
Amtrak ayaa sidoo kale sheegay in tareenada qaarkood ay ka baxayaan Station Penn Station Isniintii la soo dhaafay.
Saraakiisha ayaa sheegaya in dib-u-dhaca iyo baajisyada la filayo inay sii socdaan ilaa subaxnimadii Talaadada. Rakaabka ayaa lagula talinayaa inay eegaan "http://mta.info/lirr" ee adeegooda ugu dambeeyey.
Maaddaama dadwaynaha joogtada ah ee Penn Station ay korodhay dib-u-dhac, bilaysku waxay xannibeen gelitaanka meelaha qaarkood, ka hor-tagga dad badan oo ka soo galaya saldhigga. Duulimaadkan khasabka ah sida Diane Worley ilaa Valley Stream si uu ugu tago xarunta LIRR ee Queens, Jamaica.
Ley ayaan ku helay tareenka E, waxay ahayd masiibo. Waxay u egtahay laba saacadood oo isku dayaysa in ay guriga ku soo noqoto. Lacagta aan bixino bil kasta, way ka sii fiicnaan karaan. "
Rakaabka kale ayaa sidoo kale ku biiray walaaca Walley.
Ma waxaan ka daalay marxaladaha LIRR, Franc wuxuu yiri Francine DeLoca.
Safarka Subaxdii ee Pantone ee New York Travel (Video)
Hike ee New York City bilaabay maanta
Sababta Sababta Mowuufka ee New York waa joogto ah (Photo Gallery)
Bandhigga Tababarka Safarka New York City Exhibition Interest Interest (Video)
Tareenka New York ayaa la jebiyey
500 Mileage Maglev Train oo bilaabay imtixaanka guud (Video)
Long Island Railway Road
Laba sano oo aan raadin
Saldhiga tareennada ee aan la isticmaalin ee New York ayaa lagu badalayaa park (Video-Photo Gallery)
Tareenka ka careysnaa Chicago wuxuu kala baqay naxdinta 32 ee dhaawacmay
Tareenka Eskisehir ayaa ka baqday